Iziyobisi Vs. Umhlobo | Eyenkanga 2021
Inkampani, Imfundo Yezempilo Imfundo Yezempilo Inkampani, Iindaba Ukuzonwabisa Ulwazi Lweziyobisi Iindaba Ulwazi Lweziyobisi, Iindaba Uluntu, Inkampani Impilo-Ntle Cinezela Inkampani, Ulwazi Lweziyobisi Imfundo Yezempilo, Impilo Ekuhlaleni Imfundo Yezempilo, Iindaba Inkampani
Abilify vs Seroquel: Umahluko ophambili kunye nokufana
I-Abilify kunye ne-Seroquel zombini zihlala zimiselwe ukunyanga i-schizophrenia. Sizithelekisa ecaleni ukuze uthathe isigqibo sokuba loluphi ukhetho olulungele wena
I-Acetaminophen vs Aspirin: Umahluko ophambili kunye nokufana
I-Acetaminophen kunye ne-Aspirin zombini zihlala zichazwe ukunyanga umkhuhlane. Sizithelekisa ecaleni ukuze uthathe isigqibo sokuba loluphi ukhetho olulungele wena
I-Acyclovir kunye neValacyclovir zombini zihlala zimiselwe ukunyanga i-herpes. Sithelekisa icala elinye nelinye ukuze uthathe isigqibo sokuba loluphi ukhetho olulungele wena.
Adderall vs Adderall XR: Umahluko, ukufana, kwaye kukuphi okungcono kuwe
I-Adderall kunye ne-Adderall XR ziphatha i-ADHD kodwa zisebenza ngeendlela ezahlukeneyo. Thelekisa iziphumo ebezingalindelekanga kunye neendleko zala machiza ukufumanisa ukuba yeyiphi engcono.
Abilify vs. Rexulti: Umahluko, ukufana, kwaye kukuphi okungcono kuwe
I-Abilify kunye neRexulti inyanga i-schizophrenia kunye noxinzelelo, kodwa azifani. Thelekisa iziphumo ebezingalindelekanga kunye neendleko zokufumanisa ukuba yeyiphi engcono.
Afrin vs. Flonase: Umahluko, ukufana, kwaye kukuphi okungcono kuwe
I-Afrin neFlonase bonyanga ukuxinana kwempumlo kodwa basebenza ngeendlela ezahlukeneyo. Thelekisa iziphumo ebezingalindelekanga kunye neendleko zala machiza ukufumanisa ukuba yeyiphi engcono.
Aleve vs Ibuprofen: Umahluko ophambili kunye nokufana
I-Aleve kunye ne-Ibuprofen zihlala zimiselwe ukunyanga iintlungu eziphakathi ukuya kweziphakathi. Sithelekisa icala elinye nelinye ukuze uthathe isigqibo sokuba loluphi ukhetho olulungele wena.
I-Allegra vs Allegra-D: Umahluko, ukufana, kwaye kukuphi okungcono kuwe
I-Allegra kunye ne-Allegra-D inyanga i-aleji kodwa isebenza ngeendlela ezahlukeneyo. Thelekisa iziphumo ebezingalindelekanga kunye neendleko zala machiza ukufumanisa ukuba yeyiphi engcono.
I-Allegra vs Claritin: Umahluko, ukufana, kwaye yeyiphi engcono kuwe
I-Allegra kunye ne-Claritin zombini zisetyenziselwa ukunyanga iimpawu zokwaliwa komzimba. Ngelixa lifanayo, ichiza ngalinye linomahluko wazo esiwuthelekisa ecaleni-ngecala.
I-Allegra vs Zyrtec: Umahluko, ukufana, kwaye yeyiphi efanelekileyo kuwe
I-Allegra kunye neZyrtec ziphatha i-allergies kodwa zinomahluko. Thelekisa iziphumo ebezingalindelekanga kunye neendleko zala machiza ukufumanisa ukuba yeyiphi engcono.
I-Ambien vs. Xanax: Umahluko, ukufana, kwaye kukuphi okungcono kuwe
I-Ambien inyanga ukulala, kwaye iXanax inyanga uxinzelelo, kodwa ngamanye amaxesha inokusetyenziselwa ukunyanga ukulala okungapheliyo. Funda konke malunga nezi ziyobisi zimbini zidumileyo apha.
Amitiza vs.Linzess: Umahluko, ukufana, kwaye kukuphi okungcono kuwe
I-Amitiza kunye neLinzess banyanga i-CIC kunye ne-IBS-C, kodwa basebenza ngeendlela ezahlukeneyo. Thelekisa iziphumo ebezingalindelekanga kunye neendleko zala machiza ukufumanisa ukuba yeyiphi engcono.
I-Amoxicillin vs penicillin: Umahluko, ukufana, kwaye kukuphi okungcono kuwe
I-Amoxicillin kunye ne-penicillin banyanga usulelo lwebacteria kodwa basebenza ngeendlela ezahlukeneyo. Thelekisa la mayeza okubulala iintsholongwane ukuze ufumanise ukuba leliphi elingcono.
I-Ampicillin vs.i-amoxicillin: Umahluko, ukufana, kwaye kukuphi okungcono kuwe
I-Ampicillin kunye ne-amoxicillin inyanga usulelo lwebacteria, kodwa azifani ncam. Thelekisa la mayeza ukuze ufumanise ukuba leliphi elingcono.
Amoxicillin vs Augmentin: Umahluko ophambili kunye nokufana
I-Amoxicillin kunye ne-Augmentin zombini zihlala zichazwe kunyango losulelo. Sizithelekisa ecaleni ukuze uthathe isigqibo sokuba loluphi ukhetho olulungele wena.
Arimidex vs Aromasin: Umahluko ophambili kunye nokufana
IArimidex kunye neAromasin ngamayeza amiselweyo asetyenziselwa ukunyanga umhlaza wamabele. Ngelixa kunjalo, ichiza ngalinye linomahluko walo esiwuthelekisa ecaleni kwelinye.
IArmodafinil vs.modafinil: Umahluko, ukufana, kwaye kukuphi okungcono kuwe
IArmodafinil kunye ne-modafinil inyanga ukungasebenzi komsebenzi (i-SWD), i-narcolepsy, kunye nezinye iimeko. Thelekisa la mayeza ukuze ufumanise ukuba leliphi elingcono.
I-Aspirin vs Ibuprofen: Umahluko ophambili kunye nokufana
I-Aspirin kunye ne-Ibuprofen zombini zihlala zimiselwe ukunyanga iintlungu zexeshana. Sithelekisa icala elinye nelinye ukuze uthathe isigqibo sokuba loluphi ukhetho olulungele wena.
I-Atorvastatin vs simvastatin: Umahluko, ukufana, kwaye kukuphi okungcono kuwe
I-Atorvastatin kunye ne-simvastatin inyanga i-cholesterol ephezulu kodwa isebenze ngeendlela ezahlukeneyo. Thelekisa iziphumo ebezingalindelekanga kunye neendleko zala machiza ukufumanisa ukuba yeyiphi engcono.
I-Ativan vs Xanax: Umahluko, ukufana, kwaye kukuphi okungcono kuwe
I-Ativan kunye neXanax bobabini baphatha uxinzelelo kodwa abafani ncam. Thelekisa iziphumo ebezingalindelekanga kunye neendleko zala machiza ukufumanisa ukuba yeyiphi engcono.
Ungayithatha njani i-chantix ngaphandle kwepakethi yokuqala
izinto ezimnandi zokutya xa ugula
yintoni into esebenzayo kwi-zyrtec
Ngaba iapile cider iviniga isusa usulelo lwegwele
zithini iindawo eziqhelekileyo zeswekile yegazi
Unganceda njani kusulelo lwendlebe